Reuters: Hub lagala baxay Xerada uu ka guuray Imaaraadka oo lagu kala iibsanayo Muqdisho,Sawirro | Mustaqbal Radio
Home - Amaanka - Reuters: Hub lagala baxay Xerada uu ka guuray Imaaraadka oo lagu kala iibsanayo Muqdisho,Sawirro
Reuters: Hub lagala baxay Xerada uu ka guuray Imaaraadka oo lagu kala iibsanayo Muqdisho,Sawirro
April 26, 2018	262 Views
Magaalada Muqdisho waxaa lagu kala iibsanayaa Hub dhawaan lagala baxay Xero ku taalla Degmada Hodon oo ay dhawaan ka guureen Tababarayaal u dhashay Dalka Imaaraadka Carabta.
Qiyaastii 600; oo qori oo ah nooca AK 47,waxaa ay ka koobanyihiin noocyada ay sameeyaan Dalalka Ruushka iyo China.
Qaar ka mid ah Hubka nooca AK 47 ee cusub
Saddex Qof oo ka mid ah Dadka iibsaday Hubkaas ayaa wakaaladda Wararka ee Reuters u sheegay in Hubka ay ka iibsadeen Ciidamada ay tababartay Imaaraadka Carabta ee dhawaan lagala wareegay Saldhigga Jeneraal Gordan ee Magaalada Muqdisho.
Dalka Imaaraadka waxaa uu Ciidamada dowladda Federaalka ah tababarayay tan iyo 2014kii,waxaana markii Sanadkan uu xumaaday xiriirka labada dal dowladda Imaaraadka ay tababarayaasheeda iyo shaqaalaheeda gargaarkaba kala baxday magaalada Muqdisho.
Qof dullaal ahb oo haya qoryaha laga xaday xerada Jeneraal Gordan ee Muqdisho.
Rob Malley, oo ah madaxa Hay’adda xasaradaha Caalamka ee loo soo gaabiyay ICG,waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka uusan midkoodna u muuqan in uu diyaar u yahay xal laga gaaro khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada Dal.
Reuters waxaa ay sheegtay in iibinta hubka ay fududeynayaan Ganacsato iyo dullaaley,waxaana ay intaas ku dartay in xadidda Hubka ay billaabatay kaddib markii Tababarayaashii Imaaraadka ay isaga baxeen Xeradii ay Ciidamada ku tababarayeen.
Afar ka mid ah Qoryaha AK 47 ee suuqyada lagu iibinayo.
Cali Jaamac waxaa uu ka midyahay dadka hubkaas iibsaday,waxaa uu Reuters u sheegay in Qorigiiba ay kala baxeen $700 iyada oo qiimahiisa saxda ah ee hadda uu gaarayo $1,350,waxaa uu xusay in 600,ilaa 700 oo Qori ay ku jiraan Magaalada islamarkaana suuq madow lagu kala iibsanayo.
Labo ka mid ah qoryaha AK 47, oo uu qof Jawaan ku wado.
Isniintii la soo dhaafay Ciidamo ka tirsan Milatariga Soomaaliya ayaa weerar ku qaaday Xerada,waxaa ay ka saareen Ciidamadii ay tababareen Imaaraadka ,kuwaas oo iyaga oo hubkooda wata lagu arkay qaar ka mid ah degmooyinka Muqdisho.
Qof heysta mid ka mid ah Qoryaha laga xaday Xerada Jen. Gordan.
Ciidamada Danab oo laga keenay Garoonka Ciidanka Cirka ee Balli Doogle ee Gobolka Shabeellaha hoose ayaa la dejiyay Xerada ay ka baxeen Imaaraadka.
Halkan ka aqrin Maqaalka oo dhan